अभिनेत्री आँचललाई पोषणविद् उदिपको मीठो बोलीले छोयो। उनको सुझाव अनुसरण गरेर आँचलले केही महिनामै १० केजी तौल घटाइन्। वजनसँगै दूरी पनि घट्यो र उनीहरू नजिकिए। निकटता प्रेममा परिणत भयो। उनीहरूले प्रणय उडान भरे।
आजकल प्रेमीहरूको सबैभन्दा ठूलो लमी फेसबुक हो। यही सञ्जालमा प्रेमी– प्रेमिका एकअर्कासँग भेट्छन् र प्रेणय उडान सुरु गर्छन्। अभिनेत्री आँचल शर्मा र पोषणविद् उदिप श्रेष्ठको पनि पहिलो लमी फेसबुक नै थियो। यहीँ उनीहरूको देखादेख भयो, चिनजान भयो, अनि उनीहरू प्रेममा परे। दुवैको प्रेमलाई परिवारले पनि हरियो झण्डा देखाइदिएपछि उनीहरू फागुनको अन्तिमतिर विवाह गर्दैै छन्।
आँचल उदिपको केयर गर्ने बानीको कायल छिन्। उनी स–साना कुरा पनि ख्याल गर्छन्। उता उदिप आँचललाई असल र पर्फेक्ट केटी मान्छन्।
यसपछि आँचल र उदिपको कुरा हुन्थ्यो, तर एकदम पातलो। मुश्किलले दुईतीन हप्तामा एक पटक। तर, उदिपको सल्लाह अनुसरण गर्दै जाँदा आँचलले १० केजी तौल घटाइन्। आँचलसँग यसरी फेसबुकमा कुरा भइरहँदा उदिप अमेरिकामा थिए। फिलिपिन्सबाट एमबीबीएस सकेका उनी न्युट्रिसनको कोर्स गर्न अमेरिका पुगेका थिए। तर, उता रहँदा नै उनले आँचलझैँ थुप्रै सेलिब्रिटीलाई डाइटको सल्लाह दिने गरेका थिए। आँचललाई सुरुमा उदिपको बोली मात्र मन परेको भए पनि उदिपलाई भने सिंगै आँचल मन परेको थियो।
‘खै, त्यो कसैसँग पहिलो चोटि नै हुन्छ नि, आफ्नो जस्तो !’ उदिपले सम्झिए, ‘ऊसँग कुरा गर्दा त्यस्तै भएको थियो। मेरो इन्ट्युसनले सही भनेको रैछ।’
आँचलको कुरा सुनिरहेका उदिपले उनलाई ओभरटेक गर्दै भने, ‘तर, फस्ट टाइम भेट्दा कति समय बसेका थियौँ र ? जम्मा १५ मिनेट। त्यो पनि पूरा समय कारको ऐनामा हेरेर बितायो।’
भेटेको तीन महिना भइसक्दा पनि दुवैले एकअर्कालाई माया गर्ने कुरा शब्दमा अभिव्यक्त गरेका थिएनन्। आँचल उदिपको मुखबाट प्रेमका ढाई अक्षर सुन्न आतुर थिइन्। तर, उनी भने प्रेमको नामै लिइरहेका थिएनन्।
‘अनि के आफूलाई चाहिँ लाज लागेन त ?’ आँचलले उदिपलाई छड्के हेरेर मुस्कुराउँदै भनिन्।
उतिबेला उदिपको प्रस्ताव स्वीकार गरे पनि आँचललाई तत्कालै विवाह भइहाल्ला भन्ने लागेको थिएन। तर, विवाह नजिक आइरहँदा उनले बूढापाकाले भन्ने गरेको उखान सम्झने गरेकी छिन्। ‘जन्म, मृत्यु र विवाह समयको हातमा हुन्छ भन्थे, हो रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘मुखैमा विवाह आइरहँदा हो रैछ भन्ने लागेको छ।’
उनलाई उदिपसँग विवाह हुनै लाग्दा आफैँले भनेको अर्को एउटा कुराको पनि सम्झना हुन्छ। उनले एउटा अन्तर्वार्तामा विवाहका लागि जोसुकै पनि परोस्, तर नेवार र डाक्टर चाहिँ कहिल्यै नपरोस् भनेकी थिइन्। ‘भूकम्पको बेलामा म बस्ने टोलका एक जना नेवारसँग ठाकठुक परेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले मैले त्यो अन्तर्वार्तामा बिहे गर्ने केटो नेवार नपरोस् भनेकी थिएँ। त्यो मेरो कच्चा टिप्पणी थियो, जसमा मलाई खेद छ। अहिले नेवार र डाक्टरसँगै जिन्दगी बिताउने संयोग जुराइदिएर भगवान्ले मसँग मीठो बदला लिएका छन्।’
अल इज वेल
आँचल घरमा बुबासँग एकदमै नजिक छिन्। जे कुरा पनि बुबासँग सेयर गर्ने बानी छ। उदिपसँग बाक्लै भेट हुन थालेपछि उनले बुबालाई उदिपबारे बताएकी थिइन्। तर, यता उदिपले भने आँचलका बारेमा परिवारमा बताउने हिम्मत गर्न सकेका थिएनन्। किनकि, उनको परिवारमा छोराले सकभर अन्तरजातीय विवाह नगरोस् भन्ने थियो। गत सालको दशैँमा मात्र पनि हजुरआमाले टीका लगाएर उदिपलाई ‘विवाह चैँ आफ्नै जातको गर्नू, है नाति’ भनेर आशीर्वाद दिएकी थिइन्।
यता आँचलको घरमा पनि केटा आफ्नै जातको होस् भन्ने छँदै थियो। परिवारविरुद्ध जाने मुडमा यो जोडी थिएन। त्यसैले आँचलले नै उदिपलाई एकअर्काको परिवारसँग कुरा गर्न उक्साइन्। उनको विचारमा परिवारको अनुमति रहँदा मात्र आफूले सम्बन्ध जारी राख्नु जायज हुन्थ्यो। आँचलले उदिपको बुबासँग भेटिन्। उता उदिपले आँचलको बुबासँग भेटे।
‘बढीमा आधा घण्टा बसिएला भन्ने लागेको थियो तर उदीपका बुबा र मैले कुरा गर्दागर्दै तीन घण्टा बिताएछौँ,’ आँचलले भनिन्, ‘पछि उहाँले पनि मेरो बुबासँग उति नै समय बिताउनुभयो। हामी दुवैका बुबा आश्वस्त भएपछि बल्ल विवाहको कुरा अगाडि बढेको हो।’
केयरिङ उदिप, पर्फेक्ट आँचल
उदिपलाई भने आँचल असल केटी लाग्छ। ‘खै म त उनको एउटा–दुइटा मात्र कुरा राम्रो कुरा भन्नै सक्दिनँ,’ उनले भने, ‘मलाई त उनी हर कुरामा पर्फेक्ट लाग्छ।’
त्यसो हो भने के यो जोडीको कहिल्यै ठाकठुक पर्दैन ? आँचलले उदिपलाई उछिनेर भनिन्, ‘मेरो पर्छ। दिनमा एकचोटि जसो त म रिसाएकै हुन्छु। तर, उहाँले फकाइहाल्नुहुन्छ।’ आँचलको कुरामा सही थाप्दै उदिपले रिसाउने कारण बताए, ‘उनलाई छिनछिनमा हाई–हेल्लो गरिरहनुपर्ने हुन्छ। तर, म पेसेन्टसँग भएको बेला अरू सब कुरा बिर्सन्छु। यही निहुँमा उनले एकदुई घण्टी फोन काट्छिन् तर तेस्रो घण्टीमा उठाउँछिन्।’
विवाहपछि फिल्म ?
विवाह गरेपछि हिरोइनको आयु सकिन्छ भन्ने कुरा नेपालका धेरै अभिनेत्रीले गलत प्रमाणित गरिसकेका छन्। आँचल पनि हिरोइनको यही लिस्टमा सामेल हुन चाहन्छिन्। उदिप स्वयं पनि आँचल विवाहपछि पनि अभिनय यात्रा जारी राखून् भन्ने चाहन्छन्। ‘परिवारको चाहना नै उनले आफ्नो काम जारी राखून् भन्ने छ,’ उदिपले भने, ‘तर, उनले जे निर्णय गरे पनि मेरो समर्थन छ।’
अनि आँचलको नि ?
उनले मुस्कुराउँदै भनिन् , ‘मलाई त फिल्म पनि खेल्न मन छ, अनि बच्चा जन्माउन पनि।’